आयात १० प्रतिशतले घट्यो, मुलुक १४ अर्ब बचतमा « Mechipost.com
प्रकाशित मिति: ५ मंसिर २०७६, बिहीबार २०:४२
यस आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा आयात १०. ३ प्रतिशतले घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वित्तीय स्थितिअनुसार तीन महिनामा कुल ३ खर्ब ३४ अर्बको बस्तु आयात भएको छ ।
भारतबाट हुने आयात १२. २ प्रतिशतले घटेको छ भने अन्य मुलुकबाट हुने आयात १९. १ प्रतिशतले घटेको छ । चीनबाट हुने आयात भने ११. ६ प्रतिशतले बढेको छ । पाम तेल, हटरोल सिट, मेसिनरी तथा पार्टपूर्जा, विद्युतीय उपकरण तथा सोलार प्यानल लगायत बस्तुको आयात बढेको छ । हवाईजहाज तथा पार्टपूर्जा, एमएस बिलेट, पेट्रोलियम पदार्थ, सुन, यातायातका उपकरण तथा पार्टपूर्जाको आयात घटेको छ ।
आयात घट्दा निर्यात भने १४. ४ प्रतिशतले बढेको छ । तीन महिनामा कुल २७ अर्ब १७ करोडको बस्तु निर्यात भएको छ । गत वर्ष यस अवधिमा १६ प्रतिशतले बढेको निर्यात अहिले १४ मा खुम्चिएको हो । गन्तव्यका आधारमा भारततर्फ हुने निर्यात ३५. ८ प्रतिशतले बढेको छ ।
आयात र निर्यातका आधारमा मुलुकको तीन महिनाको व्यापार घाटा ३ खर्ब ७ अर्ब छ । गत वर्षको यस अवधिको तुलनामा व्यापार घाटा १२ प्रतिशतले घटेको हो । मुलुकको व्यापार घाटा घटेसँगै भुक्तानी सन्तुलन (शोधनान्तर स्थिति) बचतमा आएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार तीन महिनाको भुक्तानी सन्तुलन १४ अर्ब ४३ करोड बचतमा छ ।
यसको अर्थ मुलुकबाट बाहिरिने रकमभन्दा भित्रिने रकम १४ अर्ब ४३ करोड बढी छ । अघिल्लो वर्षको यस अवधिमा भुक्तानी सन्तुलन ३५ अर्ब ४२ करोड घाटामा थियो । तीन महिनामा प्रत्येक्ष वैदेशिक लगानी ४ अर्ब भित्रिएको छ । पुँजीगत ट्रान्सफर ३ अर्ब ६८ करोड छ । गत वर्षको यस अवधिमा यस्तो रकम ३ अर्ब ५५ करोड थियो ।
समीक्षा अवधिमा चालु खाता घाटा २७ अर्ब १८ करोड छ । अघिल्लो वर्ष यस अवधिमा ८१ अर्ब ७४ करोड थियो । मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चितीमा सुधार आएको छ । तीन महिनामा यस्तो सञ्चिती ४. ७ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ८७ अर्ब पुगेको छ । यो सञ्चितीले ९. ८ महिनाको धान्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
काठमाडौँ । तपाईंले एक वर्षमा के कति कर तिर्नुपर्ला ? हिसाब गर्नुभएको छ । यदि
काठमाडौँ । तपाईको टाउकामा ऋणको भार कति छ ? उत्तर पनि तपाईसँगै छ । व्यक्तिगत